Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ José Gimenez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha; “El Comandante". Anyị José Jose Gimenez Ụmụaka Akụkọ na Akwụkwọ akụkọ na-enweghị isi Ihe kpatara eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo na ndu ya, ndu ndi ozo, akuko nke ozo tutu ama aha, bilite na akuko akuko, nmekorita na ndu onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye siri ike, dị ike ma na-agba ọsọ ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Jose Gimenez nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Agbanwe Eziokwu- Ndụ mbido
Malite ya, aha ya bụ José María Giménez de Vargas. José Gimenez ka a na-akpọkarị ya nne ya bụ Judith de Vargas na nna, José Enrique Giménez na Toledo, Uruguay. Nne na nna ndị a na-ese n'okpuru ebe a bụ ndị si n'ezinụlọ dị n'etiti ma na-arụ ọrụ n'ezinụlọ.
Ezinụlọ Jose Gimenez - Nne - Judith de Vargas na nna, José Enrique Giménez. Ebe E Si Nweta Instagram
Jose Giminez tolitere na ụmụnne ya nwanyị na obodo ya, Toledo. Ọ bụ obere obodo na Canelones Department of Uruguay. Ná mmalite, a kọwara obere Jose dị n'okpuru ebe a dị ka nwatakịrị ihere, nwayo dị jụụ ma dị ike.
Foto Jose Gimenez nke Childhoodmụaka. Ebe E Si Nweta Instagram
Ka oge na-aga n'oge ọ bụ nwata, a na-eji ike dị otú ahụ arụ ọrụ mgbe Gimenez na-egwu bọl ma n'oge ụlọ akwụkwọ na akwụkwọ ụlọ akwụkwọ. Ịgba bọl mgbe ị na-aga ụlọ akwụkwọ na-esonyere Jose na-enwe nkwado maka nne na nna ya.
N'oge ahụ, nna ya bụ José Enrique Giménez nwere obi ụtọ ịlọta ọrụ n'oge. Ọ ga-akpọrọ nwa ya mgbe ọ bụla ọ na-azụ ya ọbụlagodi na ọ pụtara ịhapụ ya tupu ị gawa ọrụ. Mama Jose, Judith de Vargas rụkwara otu ọrụ ahụ.
Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Agbanwe Eziokwu- Nrụpụta Ọrụ na Ndụ Ndụ Mmalite
N'ógbè ndị dị na Canelones, obere Josọs na otu ezigbo enyi ya bụ Franco Milano na-egwuri egwu. N'oge ahụ, mn bu nrọ nke nwatakiri obula iji bia na ulo akwukwo dika igwu egwu ulo akwukwo ndi ozo n'enyeghi ego.
Enyi Jose Gimenez Franco Milano bụ onye mbụ n'etiti ndị ọgbọ ya nabatara na agụmakwụkwọ obodo. Mgbe ọ banyere, ọ kpaliri Jose Gimenez ịga otu ikpe na ngalaba Penarol.
“Mụ na Franco Milano gara ebe ahụ. Mgbe m ruru agụmakwụkwọ, onye nhazi mbụ nke ngalaba Penarol na-eto eto jụrụ m. 'Kedu ihe ị na-eme ebe a?'. 'Agwara m ya na m bịara gbaa bọl, na achọrọ m igwu egwu na Penarol' ”
kwuru Jose Gimenez. N'ezie, azịza ya nyere ya pụtara. Nke a bịara mgbe ọ nwesịrị ule ule ole na ole. Ihe ntụgharị ahụ pụtara dị ka ndị a;
"Mba, ezigbo, ịkwesighi ịgba bọọlụ, mee ihe ọzọ, ị nweghị nka."
kwuru na onye nhazi nke Penarol ntorobịa.
Nzaghachi a na-ewute Jose na ọ maara nke ọma na igwu egwu Football na agụghị akwụkwọ bụ ihe kachasị mkpa. Ọ gbapụrụ ma gaa n'ụlọ na-ebe ákwá, na-ahapụ enyi ya bụ Franco Milano onye ụlọ ọrụ ahụ họpụtara.
Site na oge ndakpọ olileanya ahụ, Jose Gimenez kwere nkwa na ya ga-eme ya. Ọ bụ ezie na ọ maghị ma ọ chọrọ ịbụ nnukwu ọkpụkpọ. Agbanyeghị, ọ kwenyesiri ike na ọ ga-eme ya.
N'oge a, mkpebi siri ike na ndidi ghọrọ okwu nche ya. Ọ bụ Toledo Junior ka Josaịa kwadoro, otu ìgwè si agbata obi ya nke ndị dị umeala n'obi.
Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Agbanwe Eziokwu- Ụzọ Ebube
Gimenez na ngwa ngwa ya na Toledo Junior, na-ahụ ọrụ niile ọ na-eto eto na ụlọ ọgbakọ tupu ya agbanye Danubio FC, bụ ụlọ a ma ama maka ịkwado ndị na-agba bọl na Uruguay na Europe. Giménez na nnukwu ume ya mere ka ọ bụrụ onye ọkachamara na-egwu maka ụlọ ịgba egwu na Uruguayan Primera División.
Jose Gimenez Afọ na Danubio FC Credit to FootballTop
Ka ọ nọgidere na-etolite, Gimenez hụrụ onwe ya ịbụ onye kachasị mma n'etiti ndị ọgbọ ya. Nke a na-eweta nrụgide mgbe niile iji rụọ ọrụ nke ọ na-emeli. Mgbe ọ dị afọ 17, Josaịa weere na ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị isi Europe kachasị elu bụ nke dị Atlético Madrid.
Ụbọchị a kachasị mkpa ná ndụ ya mesịrị mechaa. Nrọ ya mezuru na 25th nke April 2013, ụbọchị Jose Gimenez bụ onye nwere obi ụtọ bịanyere aka ná nkwekọrịta iji soro Atlético Madrid gaa Spain.
Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Agbanwe Eziokwu- Bilie na-ewu ewu
Jose Gimemez aghaghị ịkwadebe ruo oge tupu oge 2013-2014 tupu ya apụta na nke mbụ ya na ọgbakọ Spanish. Nnukwu aha ya bụ mgbe ọ meriri nnukwu isi megide Real Madrid nnukwu mmeri na mmeri 2-0 nke Atlético site na Copa del Rey na Jenụwarị 2015.
N'oge na-adịghị anya tupu asọmpi trophies amalite itinye na Gimenez's CV. Dị ka n'oge ederede, ụlọ ọrụ Uruguayan dị azụ merie Spanish Supercup, Europa Njikọ na UEFA Supercup.
N'ezie, nwata nwoke a jụrụ ajụ bụ onye mechara kpọọ aha "El Comandante”Gosipụtara ugbu a na ụwa na ọ bụ nkwa ndị ọzọ kachasị mkpa nke ọgbọ Uruguayan na-agbachitere Diego Godin.
Dị ka n'oge ederede, José Gimenez aghọwo ụgbọ ahụ Diego Godin's Adobe na Diego Simeone enweghị mgbidi. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Agbanwe Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
Nwoke ọ bụla nwere obi ụtọ chọrọ nwanyị. Otú ọ dị, n'azụ onye na-agba ọsọ na Jose Gimenez, e nwere WAG mara mma na onye mara mma nke Regina Lafolla.
Jose Gimenez na Regina Lafolla. Ebe E Si Nweta Fabwags.
Ndị enyi abụọ hụrụ na 2012, oge Regina hụrụ nwoke ya na TV n'oge mgbakọ U-20 World Cup. Mgbe ha na-ezute ibe ha, ha abụọ hụrụ ibe ha n'anya ma malite ịlụ ibe ha.
Dị ka akụkọ mgbasa ozi si kwuo, di na nwunye ahụ ka ga-alụbeghị. Ha nwere ụmụ nwoke abụọ aha ya bụ Lautaro Bautista Gimenez Lafolla nke a mụrụ na 2013 na onye ọzọ a na-amaghị aha ya n'oge ederede.
Nwunye Jose Gimenez Regina Lafolla na Kidsmụaka.
Ị maara?… Regina Lafolla bụ onye na-adịghị aghọta ọtụtụ ihe banyere egwuregwu nke football n'agbanyeghị na di ya na-abụ ndị nrịba ama. Otú ọ dị, dịka ọtụtụ ndị ọzọ na-akwado WAG, ọ na-enwe mmasị ịhụ di ya nke ọma.
Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Agbanwe Eziokwu- Ndụ nke Onye
Ịmata Jose Gimenez ndụ onwe onye ga - enyere gị aka ịchọta ya zuru ezu. Malite na, ọ bụ onye na-abụghị nanị na eccentric na ike kama onye na-eche echiche miri emi bụ onye nwere ike ịhụ ihe na-enweghị ajọ mbunobi, na-eme ya nsogbu nsogbu.
José Gimenez bụ onye nwere ike ime ka ọ dịkwuo ike na ike dị ya gburugburu. Ị maara?… Mgbe ụfọdụ, Jose na-enweta mkpa a dị oke mkpa iji oge naanị ya pụọ ​​ma hapụ ihe ọ bụla, iji weghachi ike ya.
Nakwa na ndụ onwe ya, Jose Gimenez bụ nnukwu onye hụrụ nkịta n'anya. N'ezie, a na-ekwu na ọ nweghị iguzosi ike n'ihe fọdụrụ na egwuregwu nke oge a. Otú ọ dị, nke a adịghị echebara mmekọrịta dị n'etiti Jose Gimenez na ndị nkịta ya echiche.
Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Agbanwe Eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Ezinụlọ Jose Gimenez maara nke ọdịbendị Spanish ebe ọ bụ na ndị Uruguayan na-asụ Spanish. Otú ọ dị, o nwere ezinụlọ ya site na Toledo, obodo nta a ma ama nke nwere ọnụ ọgụgụ nke ndị bi na 4,400, dị ka ọnụ ọgụgụ 2011.
Banyere Nna Jose Gimenez: Nna Jose Gimenez bụ nwoke na-ahụ onwe ya dị ka onye na-eche nrọ ya ugbu a site n'ịkwado ọrụ nwa ya nwoke. José Enrique Giménez maara nke ọma maka iyi nwa ya nwoke na klọb klọb.
Banyere nna ya, José Enrique Giménez.
Banyere Jose Gimenez Nne - N'adịghị ka di ya, Judith de Vargas emeela mkpebi dị mma ịghara ịchọ ịkwanyere ọha mmadụ ùgwù. Dị nnọọ ka nwunye nwa ya, ọ maghị banyere bọl.
Banyere José Gimenez Ụmụnne: Jose Gimenez amụtaghị naanị ya na ndị mụrụ ya. Dika nchoputa anyi si kwuo, o nwere umu nne ndi mara mma ndi o ghagoro ogologo iji chebe ha ka ndi mmadu ghara ile ha anya.
Ezigbo Nwanna Jose Gimenez na Instagram
Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Agbanwe Eziokwu- LifeStyle
Gimenez bụ onye egwuregwu egwuregwu. N'ihi ya, a na-atụ anya na ọ ga-ebi ndụ dị mma n'enweghị onye ọ bụla, ma ịhụnanya nke ndụ ya, Regina Lafolla.
Jose Gimenez Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Ihe Ndị Na-adịghị Agbanwe Eziokwu- Eziokwu efu
Ozugbo Enwere Oge Ịkpa Aka na Madrid:
Ibi na Madrid siri ike maka Jose Gimenez ebe ọ ka bụ nwata n'oge ahụ. Nri bu ihe di mgbagwoju anya nye ya ma obu nani na ya na ekwu okwu ya site na Skype. Otú ọ dị, oge ndị ahụ agafeela dịka Jose maara ugbu a esi esi nri.
Banyere atụmatụ ya:
Dị ka e kwuru n'okpuru ebe a, Giménez bụ onye na-ahụ aghụghọ n'anya. Ihe igbu egbu ya na-adabere na mmalite ya na oge nwata. Na ogwe aka ya bụ ụbọchị nke mbụ ya.
Ịme enyi na enyi na enyi:
inwe Chineke na Cebolla Rodriguez mere ka ihe niile dị mfe maka Jose Gimenez ebe ọ nọ na Europe. Ndi otu obodo ha nyeere ya aka n'inye ndụmọdụ banyere otu esi esi etinye ndu ya n'udo.
Jose Gimenez ndị enyemaka mbụ Godin (n'aka ekpe) na Cebolla (n'aka nri). Ebe E Si Nweta Aguanten Che
Otú ọ dị, Cebolla dị nso. Ma ya ma Josaịa na-akọrọ ụlọ n'oge ya na Athletico Madrid ma na-egwuri egwu site na mba Uruguay.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ ihe anyị Jose Gimenez Childhood Akụkọ na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.